Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka Al-shabaab – Kalfadhi
Sheekh Cabdi Maxamed Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Jubbaland ayaa Dowladda Federaalka Soomaaliya ku amaanay dagaalka ay kula jirto Al-shabaab ee ka socda Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxa uuna ku taliyay in loo midoobo dagaalka Al-shabaab.
Guddoomiye Sheekh Cabdi ayaa sheegay in Al-shabaab ay maalin walba ay dilaan dad shacab ah oo wax danbi ah galabsan sidaas darteedna aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka ay dalka ka geestaan.
“Waa in aan u midownaa dagaalka argigixisada maalin walba dila dadkayna dalkana bur buriya, waa in aan kasoo saarnaa kaynta wiilashaan dadka laayay” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Jubabland
Guddoomiyaha Baarlmaanka Jubbaland ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya in uu horkaco dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda kale ee dalkana ay ku daba-feelmaan Madaxweyne Farmaajo, waxa uu tilmaamay in wadada kaliya ee Al-shabaab looga adkaan karo ay tahay wadajir iyo iskaashi.
“Mudane Madaxweyne waxaan kuugu baaqayaa in aad na hogaamiso dagaalkana noo hor-kacdo si dalka iyo dadka loo badbaadiyo, annaga oo ah wakiilada shacabkana aan kugu daba feellano” ayuu yiri Sheekh Cabdi Maxamed Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland ayaa ku baaqay inta aan doorashada iyo diyaar garowgeeda la galin marka hore Al-shabaab laga saaro dalka kadibna la qorsheeyo nuuca doorasho iyo sida ay dalka uga dhici karto doorasho lagu qanacsan yahay.
“Marka hore waa in aan dalka ka saarnaa Al-shabaab kadib ayey tahay in laga fekero nuuca doorasho oo dalka ka dhacda balse waa in aan marka hore Al-shabaab ka adkaanaa” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland oo shalay ka hadlay xarunta Iskuul Buluusiya ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Golaha Shacab oo faray Xukuumadda in ay si deg deg ah u soo gudbiso sharciga doorashooyinka
Xildhibaan Gama'diid oo ku baaqay in si deg deg ah loo bixiyo mushaarka Ciidamada